Maqaalo - XOG MUHIIM AH | WARAR SUGAN |
Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa degaanada maamulka Koonfur Galbeed ayaa xalay Kormeer ku tagay Saldhigyo ciidan oo ku yaalla Magaalada Baydhabo. Nuuradiin Gacma, Afhayeenka maamulka K/galbeed ayaa sheegay in ulajeedka Roobow u joogo Baydhabo tahay sidii kaliya ugu kuurgeli lahaa xaaladda amni. Sidoo kale wuxuu sheegay Afhayeenka...
Ilaa burburkii Somalia 1991, waxaa qolo walba ku caano shubaysay Oday dhaqameed, ama Siyaasi ama Wadaad inuu yeesho hogaanka qolyahaas, laakiin midna kumaysan aflixin ama waaba yartahay inta hogaamiye ee xaqiijisay hankii laga lahaa. Marka laga yimaado in qolo walba ay sameysatey hoggaamiye waxa jirtey in Soomaaliya Bur burki kadib ay ka soo taliyeen Hoggamiyaal kala duwan...
Puntland Gorma la as asaasey. Puntland waa mid kamid ah Maamulada ka tirsan Dowlada Faderalka ee Soomaaliya waxaa la asaasay 1998kii, waxaana asaasay isimo ,siyaasiyiin,ganacsato,culima’udiin ,haween dadka ugu caansanaa ee isugu yimi shirkii GAROWE kadhacay 1998 waxaa kamid ahaa madaxweynihii hore ee Dawladda DFKMG Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Ibrahim Abshir Ibrahim,...
QOWDA MAQASHII WAXNA HA U QABAN !!! Maqaalkan oo aan ugu magacdaray Xogta-Dahsoon waxa aan kaga hadli doonaa fashilka qaar ka mid ah hay’adaha dastuuriga ah ee dowladda Puntland. Ninkii goommanaan jirey haddii guulle wax u dhiibo Gadaal wax uma fiirshoo hawaa geysa meel darane Cidna uma gargaaroo faqruu gocan abidkiise Gacalada tolkiyo dabakannaax yow garnaqi...
Labo dhalinyaro ah oo bartamihii sagaashamaadkii dhashay ayaa sheekeysanaayay, midba midka kale inta uu hadalka kaxa xariifsan yahay ayuuna adeegsanaayey waxa uu awoodo. Labadaba waa taageerayaasha Ciyaartoyda Yurube mid waxaa lagu naaneysaa Axmedinho, midka kalena Dairovic. Hase yeeshee labaduba waa Soomaali dhalad ah, dadka aan dhanna uga bixin, hase yeeshee ay aaladaha...
TARJUMAAN iyo ODEY MASEYRSAN! (Qalinkii Abuukar Albadri)
dey 65 jir ah oo gabar xaafadda ugu jirtay guursaday, misena dhalinyarada uga maseyra ayay dhibaato dhanka maseyrka ah qabsatay kaddib markii uu nin u tarjumayey qalad ugu tarjumay meel Isbitaal ah. Si aad sheekada u fahamto ninka Xaaskiisa waxaa la dhahaa HANI, waa gabar dhawr iyo toban jir ah, aad ayuu u jecel yahay, maseyrna waa uu dilay maadaama ay qurxoon tahay, bashaashna...
Sannad ka hor ayay ahayd markii uu geeriyooday Axmed Xasan Cawke. Warbixin aan markaas ka qoray ayaan halkan dib ugu soo daabacay. Ujeeddadu waa in aad akhrisato haddii aadan hore u sameyn iyo in aan xusuusanno una duceyno. Rabbi ha u naxariisto. Allah ha u naxariisto, Axmed Xasan Cawke, in badan ayaan war isla qorsheynay, isla qornay oo isla qaabeeynay. Aad ayay ii...
Najma waa 15, waa ardayad xaafada ay ku dhalatay, kuna soo kortay ayey weli degan yihiin reerkeeda, ma socod badna oo weligeed meel gaari loo raaco looma dirin, iskuulka ay dhigato aad ugama foga gurigooda. Waa gabar yar oo qurux badan, aadna u suurooneysa. Wejigeeda degenaan badan ayaa laga dareemaa, dhanka caqligana aad ayey ugaga miisaan sarreysaa dhalinta asaageeda...